Wakiilka adeegga maraakiibta adduunka oo dhan | Adeegga maraakiibta ee adduunka oo dhan 'Souring & Trader'
Adeegga Fulinta Shiinaha
Qiimaha lagu daray-adeegga
Khadadka Tooska ah
BULSHADA LOOGU TALAGALAY LOOGU TALAGALAY LOOGU TALAGALAY Amazon FBA Ma waxaad joogtaa banaanka Shiinaha oo aad rabtaa inaad alaab u dirto bakhaarka amazon? Waxaa laga yaabaa inaad ka careysiiso in soo saarayaasha aysan waligood sida loo diyaariyo shixnadaha FBA waxaadna u baahan tahay inaad sharraxdo marar badan. Sidoo kale soo dejinta caalamiga ah waa mid aad u dhib badan mar walbana waa dhibaatada madax xanuunka. Hadda waxaan halkaan u nimid inaan kaa caawino sidii aad u bixi lahayd. Waxaan siinaa macaamiisha adeegga soo qaadista darawalnimada ee magaalooyinka waaweyn ee Shiinaha, pr ...
Khadka Tooska Ah iyadoo lala kaashanayo ilaha xasilloonida hawada ee deggan Hongkong iyo kuwa xawilaadda saadka ee adduunka ka socda waddamada Yurub iyo Mareykanka, SunsonExpress Direct Line waa adeeg isku-darka iyo boostada isugu jira ee qaabka DDP (Declare Duty Paid). Waxaan ka codsaneynaa duulimaad toos ah Hongkong illaa marinka iridda maalin kasta waxaanna qabannaa isla maalintaas nadiifinta caadada. Waa 100% si buuxda u xakameysa xamuulka hawada iyo gaarsiinta mayl ee ugu dambeysay ayaa la heli karaa taas oo ah xalka dhaqaale ee keenista degdegga ah taas oo inta badan d ...
Xalka Shixnadda Boostada Waxaan si dhab ah u fahansanahay xalka boostada had iyo jeer waa ikhtiyaarka hore ee ganacsiga e-commerce maadaama ay ku raaxeysato sicirka hoose. Si loo qanciyo baahida ganacsatada kala duwan, waxaan la shaqeyneynaa xafiisyo badan oo boostada ah sanadaha soo socda waxaanna sii wadnaa ka takhalusida adeegga xun mararka qaarkood. Hada inta soo hartay waa kuwa ugu fiican. Shiinaha Post China Post wuxuu u qaybsan yahay baakado dusha sare ah iyo baakado diiwaangashan. Waa adeeg caalami ah oo loogu talagalay xirmooyinka miisaankoodu ka hooseeyo 2KG. Shiinaha ...
Markabka Adeegga Xawaaraha ee akoonkaaga degdegga ahi aad buu qaali u yahay? Ka dib markaa maxaan u rarneyn muggeena? Waxaan ku siineynaa macaamiisha adeegga xawaaraha sida DHL, UPS iyo EMS qiimo jaban. Gaarsiinta degdegga ah ee heerarka dhaqaalaha, waad u qalantaa inaad isticmaasho. DHL waa hoosaad ka tirsan Deutsche Post DHL, oo ​​ah koox caan ku ah boosta iyo kooxda saadka. Waxay badiyaa ka kooban tahay qaybaha ganacsiga ee soo socda: DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight and DHL Supply Chain. Sannadkii 1969, DHL waxay fureen safarkoodii ugu horreeyay ...